3.REALR INC Medical Technology Co, Ltd. yasekwa ngo-2019 ……
ngomphathi ku 21-07-27
I-Ultra picosecond sisixhobo esikhethekileyo sobuxoki phakathi kwezixhobo zelaser zasekhaya, ezihlanganisa ukususwa kwamabala, ukuvuselelwa kwesikhumba kunye nokuhlamba ubuso. I-Super picosecond iveliswa nguSinoron kunye no-h ...
2.REALR INC Medical Technology Co, Ltd. yasekwa ngo-2019 ……
Nangona ukuguga kwenzeka ngokobudala, ichaphazeleka zizinto zokuzalwa kwaye inkqubo yokuguga ecothayo ibangelwa ikakhulu yimikhwa eyahlukeneyo yexesha elide. Ke, yeyiphi imikhwa emibi eya kukhawulezisa ukwaluphala? Singakuthintela njani ukwaluphala? Makhe sihlolisise. ...
1.REALR INC Medical Technology Co, Ltd. yasekwa ngo-2019 ……
I-REALR INC yeTekhnoloji yoNyango Co, Ltd. yasekwa ngo-2019, Inamaziko onyango oqeqeshiweyo kunye neenkampani ezisesikweni, Maninzi amaziko entsebenziswano e-China nase-United States, inkampani yethu ibithenga izixhobo zonyango zokwenyani ezintsha ...